Ngaba Ibalulekile Into Yokuba Ukhetha Umculo Onjani? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Ndivuka nje, ndiye ndivule umculo. Xa ndingena emotweni, ndiye ndivule umculo. Xa ndisendlini ndizipholele, ndicoca ibe ndifunda, ndikhalisa umculo. Ndihlala ndimamele umculo.”—UCarla.
Ngaba ufana noCarla ngendlela owuthanda ngayo umculo? Ukuba kunjalo, eli nqaku liza kukunceda ubone iingenelo, uphephe iingozi uze uwukhethe kakuhle umculo.
Ukuphulaphula umculo kunokuthelekiswa nokutya ukutya. Kwezi meko zombini, into ebalulekileyo ngumlinganiselo nokutya ngendlela efanelekileyo. Makhe sithethe ngoku:
Umculo unokuyiphucula indlela ovakalelwa ngayo.
“Ukuba izinto azindihambeli kakuhle ngolo suku, ndiye ndifake umculo endiwuthandayo ibe ndiye ndikhawuleze ndive isiqabu.”—UMark.
Umculo unokukukhumbuza izinto ezenzeka kudala.
“Amaxesha amaninzi ingoma ethile iye ibuyise iinkumbulo ezimnandi, ngenxa yoko ndiyavuya sihlandlo ngasinye ndiyiva.”—USheila.
Umculo unokumanyanisa abantu.
“Ndandikwindibano yezizwe ngezizwe yamaNgqina kaYehova, ibe njengokuba iindwendwe zazicula ingoma yokugqibela, ndazibona sele zizehlela iinyembezi. Sasithetha iilwimi ezahlukahlukeneyo kodwa umculo wawusimanyanisa.”—UTammy.
Umculo ungakunceda uhlakulele iimpawu ezibalulekileyo.
“Ukufunda ukudlala isixhobo esithile somculo kungakunceda ufunde ukuthobela uze ube nomonde. Ayonto unokukhawuleza uyenze kakuhle. Ukuze ube ngcono kuza kufuneka uqhelisele.”—UAnna.
Ngaba ubusazi? Eyona ncwadi inkulu yeBhayibhile—iiNdumiso—ineengoma eziyi-150.
Wukhethe umculo njengokuba usenjenjalo ekutyeni
Olunye uhlobo lomculo lufana nokutya okunetyhefu. Makhe sithethe ngesizathu sokuba sitsho.
Iingoma ezininzi zinamazwi athetha phandle ngesondo.
“Kubonakala ngathi iingoma ezidumileyo zisoloko zithetha ngesondo. Abazami nokuzama ukuyifihla loo nto.”—UHannah.
IBhayibhile ithi: “Uhenyuzo nako konke ukungahlambuluki nokubawa makungakhe kukhankanywe kwaukukhankanywa phakathi kwenu.” (Efese 5:3) Zibuze, ‘Ngaba umculo endiwuthandayo uyandithintela na ekuthobeleni esi sibongozo?’
Uhlobo oluthile lomculo lunokukwenza uhlale udakumbile.
“Maxa wambi ebusuku ndiye ndingqengqe ndize ndiphulaphule umculo oye undenze ndicinge ngezinto ezindenza ndidandatheke. Olu hlobo lomculo lundenza ndicinge ngezinto ezimbi.”—UTammy.
IBhayibhile ithi: “Ngaphezu kwako konke okunye okumele kulondolozwe, londoloza intliziyo yakho.” (IMizekeliso 4:23) Zibuze, ‘Ngaba umculo endiwuthandayo undenza ndihlale ndicinga ngezinto ezimbi?’
Olunye uhlobo lomculo lunokukwenza ube lugcwabevu ngumsindo.
“Umculo ondenza ndibe nomsindo ndize ndizithiye, ndingaqondanga ube yingozi kum. Ndaphawula ukuba iyatshintsha indlela endivakalelwa ngayo emva kokuba ndiwuphulaphule. Nasekhaya bayiphawula loo nto.”—UJohn.
IBhayibhile ithi: “Lahlani konke, ingqumbo, umsindo, ububi, yaye makungaphumi ntetho itshabhisayo, nantetho ingamanyala emlonyeni wenu.” (Kolose 3:8) Zibuze, ‘Ngaba umculo endiwuthandayo undenza ndibe lugcwabevu ngumsindo, mhlawumbi ndide ndingayikhathaleli indlela abavakalelwa ngayo abanye?’
Eyona nto ibalulekileyo. Wukhethe umculo. UJulie ofikisayo uzama ukwenza loo nto. Uthi: “Ndihlala ndiwuhlola umculo wam ndize ndisuse nawuphi na ongafanelekanga. Akusoloko kulula ukuyenza loo nto, kodwa ndiyazi ukuba ndenza into efanelekileyo.”
Intombazana enguTara ifunda ukwenza into efanayo. Uthi: “Maxa wambi kunomathotholo kuye kudlale ingoma enesingqi esimnandi, kodwa xa ndisiva amazwi ndiye ndiqonde ukuba kufuneka nditshintshe isitishi. Ukwenjenjalo kufana nokuxuthwa iqebengwane elimnandi emlonyeni. Kodwa ukuba andiyiphulaphuli ingoma ethetha ngesondo, kuya kuba lula ukungabelani ngesondo ngaphambi komtshato. Andifuni ukuyithatha lula imiphumo enokubangelwa ngumculo kum.”
“Umculo unokuyitshintsha kakhulu indlela esivakalelwa ngayo ibe ukuba asiwuhloli, umculo esiwukhethayo unokuba nemiphumo emibi esisenokungayiboni de sibe singene zwabha kuyo.”—UAbigail.
“Enoba sinezihlandlo ezimbalwa siyiva ingoma, inokuhlala inkenteza engqondweni. Ngenxa yoko, kungakuhle ukuba sikhawuleze siyicime ukuba ayifanelekanga. Ukuba asenzi njalo iza kuhlala engqondweni ngonaphakade.”—URobert.
Imibuzo emithathu enokukunceda ukhethe ngendlela efanelekileyo.